Bathroomlọ ịsa ahụ ịsa ahụ PVC
Veneer ụlọ ịwụ efu
Melamine ụlọ ịwụ efu
Nnukwu ụlọ ịsa ahụ lacquer
Mpempe akwụkwọ polymarble
Free Adị Basin
Mgbidi Hung Basin
KZOAO ime ụlọ ịwụ ahụ, Ọpụrụiche na nke Ọhụrụ
Ime ụlọ ịwụ dị iche na kichin, ebe kachasị mkpa n'ụlọ. Ghara ikwu na ha dị ezigbo mkpa, mara mma ma mara mma. Ime ụlọ ịwụ ahụ zuru oke na nhazi ụlọ nke oge a. KZOAO 2021 ime ụlọ ịwụ ahụ ọhụụ ọhụrụ, nke efere nkume, na-eduzi usoro ọrụ ahụ.
Blọ mposi Cabinet Care Ntụziaka
KZOAO ụlọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ na-etinye ya na uria, MDF na plywood. Iji jiri arịa ụlọ mee ihe nke ọma, biko soro ntuziaka ndị a nke ọma tupu ịmalite dabara adaba. Dina arịa ụlọ na ala dị nro iji zere mmebi ọ bụla dịka scuffs ma ọ bụ ọkọ ma nyochaa dị ka mmejọ ọ bụla ...
Mgbe ị na-ahọrọ ihe ịsa ahụ bat, mee ya n'onwe gị
Anyị nwere olile anya na ị hụrụ ngwaahịa ndị anyị kwadoro! Ha niile bụ ndị ndị n’otu n’otu họpụtara n’onwe ha. Naanị ka ịmara, BuzzFeed nwere ike ịnakọta oke ahịa ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ site na njikọ dị na peeji a ma ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa n'aka ha. Oh, na FYI - ọnụahịa ziri ezi na ihe dị na ngwaahịa dị ka nke ...
Otu esi aga akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: N’ebe a na-asa ahụ
Lọ ịsa ahụ bụ ụlọ ebe anyị na-amalite ma na-akwụsị kwa ụbọchị, nwere ọtụtụ usoro nhicha dị iche iche enyere iji mee ka anyị nwee ahụ ike. Odd mgbe ahụ, na ụlọ nke anyị na-ehichapụ ezé anyị, akpụkpọ ahụ anyị na akụkụ ahụ anyị (ọ bụghị ịkọwa mkpofu anyị) na-ejikarị kemịkal na-egbu egbu,
Kedu ihe nke wei Yu nwere? Kedu usoro usoro nlekọta nke Wei Yu nwere?
olee usoro wei Yu na-ejigide? 1, na ojiji nke onye ọ bụla icheta na ime ụlọ ịwụ nwere a onya ga-adọ idozi, n'ihi ya, anyị nwere ike ịnọgide na-eji. Emegharịna naanị gị mgbe wei Yu arụnyere, megharia ọnọdụ ịchọrọ ịkpọtụrụ ndị ọrụ aka. Ejila ihe siri ike ịkụ aka, kụọ ...
Daysbọchị 500 nchekwa dị mma
Ruo taa, taizhou kazhongao ịdị ọcha nchekwa mmepụta akara lekwasịrị bụ jupụtara 500 ụbọchị zoro ndekọ, nke agbaji ndị fọdụrụ n'ezigbo mma mmepụta ndekọ. Anyị mgbe niile rube isi na ndị mmadụ -arụpụtara ụkpụrụ, advacate nchekwa mbụ echiche, melite ọrụ nchekwa mmata, advacate saf ...
Taizhou kazhongao sanitary ware co ltd ga-egosipụta ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ na Kitchen & Bath China, Shanghai, nke a ga-ejide n'oge July 15 ruo July 17 2020, Adreesị: SHANGHAI NEW mba ọ bụla expo center Booth No: E5 B26 Tel: 1898652888
Kpọọ na: 18958652888 ma ọ bụ email @: ọrụ@kzoao.com